सत्ता गठबन्धन टुट्दै, नयाँ बन्दै प्रचण्डकाे भाेक निद्रा हराम !
September 11, 2021 N88LeaveaComment on सत्ता गठबन्धन टुट्दै, नयाँ बन्दै प्रचण्डकाे भाेक निद्रा हराम !
काठमाडौं । अमेरिकी सहयोगसम्बन्धी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) का कारण सत्ता गठबन्धन टुट्ने अवस्था विकास हुँदै गएको छ । गठबन्धनभित्र एमसीसीका कारण फाटो बढ्दै गएको छ । यसले कुनैपनि बेला गठबन्धन दुर्घटनातर्फ बढेको छ । एमसीसी पारित गर्ने पक्षमा नेपाली काँग्रेसका सभापति समेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा देखिएका छन् । उनले एमसीसी उपाध्यक्ष फतिमा सुमारसँगको भेटमा […]
September 11, 2021 N88LeaveaComment on माधवको पार्टीले बैधानिकता नपाउने, सत्तारुढ गठबन्धनमा तनाव
काठमाडाैं । सत्तारुढ गठबन्धन पाँच दललाई माधवकुमार नेपाल नतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादी (एस) पार्टीले बैधानिकता नै नपाउने त्रास देखिएको छ । सर्वाेच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पाँच दलीय गठबन्धनको बैठकमा माधवका पार्टीले बैधानिकता पाउँछ कि पाउँदेन भन्ने बिषयमा छलफल भएपछि यो तथ्य बाहिर आएकोहो । सोही कारण देउवा माधव नेतृत्वको नेकपा […]
हुम्लाबाट चीनलाई देउवा सरकारकाे च्यालेन्ज, सीमानाका पिल्लर जाँच्न बोर्डर पुगे गृहका कमाण्डर !
September 11, 2021 N88LeaveaComment on हुम्लाबाट चीनलाई देउवा सरकारकाे च्यालेन्ज, सीमानाका पिल्लर जाँच्न बोर्डर पुगे गृहका कमाण्डर !
हुम्ला। नेपाल–चीनबीच विवाद हुँदै आएको हुम्लाको उत्तरी नाकाको सीमा अध्ययनका गठन गरिएको अध्ययन टोली आज जिल्लाको सिमकोट आइपुगेको छ । टोलीले चीनसँग जोडिएका हुम्लाका १५ वटा सीमास्तभमध्ये १३ वटा सीमास्तम्भको अध्ययन गर्ने भएको छ । मौसमले साथ दिएमा १५ वटै स्तम्भको अध्ययन गरिने तर मौसमले साथ नदिएमा १३ वटा मात्रै स्तम्भको अध्ययन गरिने प्रमुख जिल्ला […]
गृहमन्त्रीको सहयोगमा गाउँका युवालाई प्रहरी जवानमा भर्ना गरिदिएको स्टाटस लेखेपछि…
September 11, 2021 N88LeaveaComment on गृहमन्त्रीको सहयोगमा गाउँका युवालाई प्रहरी जवानमा भर्ना गरिदिएको स्टाटस लेखेपछि…
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका नेताहरूबाट सिफारिस गराएका गाउँका युवाहरूको नेपाल प्रहरीको जवान पदमा नाम निकालिदिएको स्टाटस लेख्ने व्यक्त पक्राउ परेका छन् । पक्राउ पर्ने प्युठानको ऐरावती गाउँपालिका-१ का ३० वर्षीय नरेन्द्र गुरुङ रहेका छन् । उनले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको सहयोगमा प्युठानका ११ जना र देशभरबाट ४१ जनाको नाम निकाल्न सफल भएको फेसबुकमा लेखेका थिए । […]
एमसीसी बारे याेगेश भट्टराईले दिए बाेल्ड अभिब्यक्ति
September 11, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसी बारे याेगेश भट्टराईले दिए बाेल्ड अभिब्यक्ति
काठमाडौं । नेकपा एमालेका सचिव योगेश भट्टराईले नेकपा एमालेले एमसीसी सम्झौतामा भएका कतिपय प्रावधानहरुलाई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने बताएका छन् । शनिबार स्थायी कमिटीको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै भट्टराईले सम्झौताका केही बुँदा पुनःव्याख्या गर्नुपर्ने भएकोले संशोधन गरेर मात्रै एमसीसी अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन् । नेकपा हुँदा नै यसबारे तीन सदस्यीय कार्यदल बनार सुझाव लिएको भन्दै उनले […]
एमसीसीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भदौ २८ गते काठमाडौंमा वृहत प्रदर्शन गर्ने
September 11, 2021 N88LeaveaComment on एमसीसीको विरोधमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाले भदौ २८ गते काठमाडौंमा वृहत प्रदर्शन गर्ने
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नेतृत्व नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले सरकारले संसद बोलाएर एमसीसी तत्काल पास गर्ने योजना बनाइरहेको भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । शनिबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरी पार्टी प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले आफ्नो पार्टीले राष्ट्रिय र केन्द्रिकृत रुपमा नेतृत्व प्रदान गर्न एक हप्ते आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन् । उनले एमसीसीको विरोधमा भदौ […]
अरुन्धतीसहित पवित्र स्नान गरी ऋषिपञ्चमी मनाइँदै (फाेटाे र भिडियाे)
September 11, 2021 N88LeaveaComment on अरुन्धतीसहित पवित्र स्नान गरी ऋषिपञ्चमी मनाइँदै (फाेटाे र भिडियाे)
काठमाडौँ । भाद्र शुक्ल पञ्चमीका दिनमा मनाइने ऋषिपञ्चमी आज नेपाली नारीले अरुन्धतीसहित सप्तऋषिको पूजा आराधना गरी मनाउँदैछन् । महिलाले आज बिहानै उठेर नित्य कर्म गरी नजिकको नदी, खोला, ताल, तलैया र पोखरीमा गई ३६५ वटा दत्तिवनले दाँत माझ्ने, गाईको गोबर, माटो एवं खरानी लगाई स्नान गर्दछन् । हरितालिका ९तीज० को व्रत एवं पूजाआजा महिला पुरुष […]
को हुन् मादि ह’त्या का’ण्ड’का अ’भि’यु’क्त आ’वारा लोकबहादुर ?
September 11, 2021 N88LeaveaComment on को हुन् मादि ह’त्या का’ण्ड’का अ’भि’यु’क्त आ’वारा लोकबहादुर ?
सङ्खुवासभा । सङ्खुवासभा जिल्लाको मादी नगरपालिका १ उम्लिङका कार्की परिवारको ह’ त्या’ मा संलग्न एक जना अभि’ युक्त’ लाई प्र’ हरीले प’ क्रा’ उ गरेको छ । प्र’ हरीले छिमेकी २६ बर्षीय लोकबहादुर कार्कीले आफ्नै बन्धु परिवारको ह’ त्या गरेको पुष्टि गर्दै प’ क्रा’ उ गरेको हो । प’ क्रा’ उ पर्ने कार्कीले आफैले ६ […]
माेटरसाइकलकाे मूल्य बढ्याे ! अब कुन बाइककाे मूल्य कति ?
September 11, 2021 N88LeaveaComment on माेटरसाइकलकाे मूल्य बढ्याे ! अब कुन बाइककाे मूल्य कति ?
काठमाडाैं । सरकारले शुक्रबार ल्याएको प्रतिस्थापन विधेयकले मोटरसाइकलको अन्त शुल्क बढाएको छ । सरकारले १ सय सीसी देखी २सय सीसी सम्मको मोटरसाइकलमा १० प्रतिशत अन्त शुल्क वृद्धि गरेको हो । सरकारले नेपालमा बन्ने दुई पाङ्ग्रे, चार पाङ्ग्रे र सार्वजनिक यातायात निर्माण कम्पनीले आयात गर्ने एसेम्बल किटमा ५० प्रतिशत अन्त शुल्क छुट दिने निर्णय गरेको छ […]
प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी उपाध्यक्षबीच भएको गोप्य संवाद बाहिरियो ….
September 11, 2021 N88LeaveaComment on प्रधानमन्त्री देउवा र एमसीसी उपाध्यक्षबीच भएको गोप्य संवाद बाहिरियो ….
काठमाडाैं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) जसरी पनि पास गर्ने बताएपछि जनआ”क्रोश झनै बढेको छ । एमसीसीवि”रुद्ध आन्दो”लन झनै च”र्किने निश्चित छ। शुक्रबार अपरान्ह प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारसहितको टोलीसँग छलफलका क्रममा देउवाले यस्तो बताएका हुन्। नेपालका प्रतिपक्ष र अन्य सत्तारुढ दलका नेतासँगको छलफलपछि बालुवाटार पसेकी […]